Home \_ Tag "Yope"
LET’s TAKE A LOOK AT YELLOW CRANE TOWER FROM WUHAN
Yellow Crane Tower အကြောင်း လေ့လာကြည့်ရအောင်. www.yope.com.mm www.mizzima.com www.mizzima.tv www.mizzimaburmese.com …
RED CHAIR MEETS KYIN WAT
သူ့ရဲ့အသားအရေကြောင့် ကျင်ဝှက်ဆိုတာဖြစ်လာပြီး လူတွေချစ်ကြတာလို့ ပြောလိုက်တဲ့ ဟာသလူရွှင်တော် ဦးကျင်ဝှက် YOPE RED CHAIR ရဲ့မေးခွန်းတွေကို ဘယ်လို ဖြေထားသလဲ? www.yope.com.mm www.mizzima.tv www.mizzimaburmese.com www.mizzima.com #YOPE_REDCHAIR
HOW TO SOLVE YBS CASH SYSTEM?
YBA အကြွေပြဿနာ ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ? www.yope.com.mm www.mizzima.com www.mizzima.tv www.mizzimaburemese.com #YOPE_BRAVEVOICE
LOST IN MYANMAR
လူငယ်တွေအတွက် စွန့်စားခန်းပျောက်နေတဲ့မြန်မာပြည် ????????????? မြန်မာလူငယ်တွေဟာ သူတို့ဝါသနာကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ စွန့်စားကြိုးပမ်းမှုတွေလုပ်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူတို့အောင်မြင်ဖို့အတွက်ခရီးလမ်းကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းနေဆဲပါပဲ။ ဒီ video ကို ကြိုက်​နှစ်​သက်​တယ်​ဆိုရင်​ သူငယ်​ချင်း​တွေဆီကို SHARE ​ပေးခဲ့​နော်. အခြားစိတ်ဝင်စားစရာ အစီအစဉ်တွေကို ကြည့်ရှုရန် www.yope.com.mm www.mizzima.com www.mizzimaburmese.com www.mizzima.tv
အမှောင်ထဲမှာနေထိုင်ခြင်း မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုမှာ လူအများစုက မိသားစုတွေ သူငယ်ချင်းတွေကို ရင်ဖွင့်တာတွေ တိုင်ပင်တာတွေ မလုပ်ကြဘူး။ ခံစားချက်တွေအားလုံးကို စိတ်ထဲမှာထားရတာကို သဘောကျကြတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့ ထုံးတမ်းစဉ်လာတွေက လူငယ်တွေ စိတ်ကျဖို့အတွက် တရားခံဖြစ်နေပြီလား? see more at: —————— www.yope.com.mm www.mizzima.tv www.mizzimaburmese.com www.mizzima.com
BORN TO BE A REFUGEE?
လူတွေက အမှန်တရားအတွက် တိုက်ခိုက်ကြတယ်ဆိုပေမယ် အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကတော့ ဓားစာခံ ဖြစ်ကြရတယ်။ ဒီ story က ဘ၀ရပ်တည်မှုပျောက်ဆုံးနေတဲ့ အသက် ၁၄ နှစ် အရွယ် ကောင်မလေးအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ Thanks to Civil War. www.yope.com.mm www.mizzima.com www.mizzima.tv www.mizzimaburmese.com
RED CHAIR MEETS BILLY LAMIN AYE
” မိသားစုဟာ ဖူးအတွက်တော့ ဆားလိုပါပဲ ” ============================ Myanmar Idol Season2မှာ ညီမလေးကို ဆေးကျောင်းထားနိုင်ဖို့ ဝင်ပြိုင်တာလို့ဆိုခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ဂရုဏာမေတ္တာကိုရခဲ့တဲ့ ဘီလီလမင်းအေးက မိသားစုက သူ့အတွက်ဆားလိုပဲလို့ YOPE Red chair မှာဖြေခဲ့ပါတယ်။ သူဘာလို့ အခုလိုပြောတာလဲ? www.yope.com.mm www.mizzima.com www.mizzimaburmese.com www.mizzima.tv #YOPE_REDCHAIR
Will you save your country with your tax?
“ငါ ၀င်ငွေခွန် မဆောင်နိုင်ဘူး။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ငါ့ပိုက်ဆံ ငါပိုင်တယ်” အဲဒါနဲ့ ပတ်သတ်လို့ သူငယ်ချင်းတို့ဘာပြောချင်လဲ? www.yope.com.mm www.mizzima.com www.mizzimaburmese.com www.mizzima.tv